Maleeshiyaad uu hoggaaminayo guddoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisamad Gallan oo gaaray tuulada Kalabayr - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaleeshiyaad uu hoggaaminayo guddoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisamad Gallan oo gaaray tuulada Kalabayr
June 21, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maleeshiyaad badan oo uu hoggaaminayo guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa xalay soo gaaray tuulada Kalabayr, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Sida ay dadka deegaanka u sheegeen warsidaha Puntland Mirror maleeshiyada uu Gallan wato ayaa ku hubaysan gawaari badan oo tikniko ah, baabuurta xamuulka ah, wiish iyo hal gaari oo ambalaas ah, maleeshiyada ayaa tuulada Kalabayr ka degay dhanka Koonfureed ee buurta.
Dhanka kale, ciidamo ka socda dowlada Puntland oo aad u qalabaysan ayaa soo gaaray meel u dhow tuulada Kalabayr, ciidanka dowlada iyo maleeshiyada Gallan ayaa tuulada Kalabayr dhinacyadeeda Waqooyiga iyo Koonfurta kala fadhiya.
Warsida Puntland Mirror ayaa ogsoon in dhawaan ay socdeen waan-waan ay wadeen issimo waa weyn oo laga dhex waday Gallan iyo dowlada Puntland, balse dhaq-dhaqaaqan ciidan ayaa soo kordhay.
Dhanka magaalada Boosaaso wararka uu ka helayo warsidaha Puntland Mirror ayaa sheegaya in dhaq-dhaqaaq ciidan laga dareemayo magaalada oo ay wado dowlada Puntland.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan oo wareysi dhawaan siiyay idacadaha maxaliga ah ayaa sheegay in uu dagaal lagalayo dowlada Puntland oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali.
Deegaanka Kalabayr ayaa 45km u jira xarunta ganacsiga Puntland, Boosaaso.
[box]Wixii kusoo kordha wararkaas si deg deg ah ayaan idiin kusoo gudbin doonaa.[/box]
April 27, 2017 Puntland oo wacad ku martay in ay la dagaalami doonto ururada argagixisada ah iyo ficilada burcadbadeeda
Somalia vowed the war-torn country’s offering of offshore exploration tenders will be open to all, a day after President Recep Tayyip Erdogan said Turkey is keen on a call to participate. Erdogan said Somalia’s invitation [...]
Shillin Soomaali badan oo kaash ah oo lagu qabtay kantaroolka magaalada Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ee ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso ayaa qabtay lacago badan oo Shillin Soomaali kaash ah, sida uu sheegay sargaal ciidamada ah. Taliyaha ciidamada kantaroolka Boosaaso Maxamuud Qalaf ayaa warbaahinta u sheegay [...]